Ny ho avy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Hainao fa misy vaovao tsara. Fa tena mahafinaritra anao ve izany? Tahaka ny maro aminareo, nandritra ny ankamaroan'ny fiainako dia nampianarina aho fa miaina amin'ny andro vitsy lasa izay. Izany dia nanome ahy fomba fijery iray izay mijery zavatra avy amin'ny fomba fijery iray izay hiafaran'izao tontolo izao araka ny fantatsika anio dia ho taona vitsy monja. Fa raha manao araka ny tokony ho izy aho dia ...
Rehefa fantatsika fa velona sy manenona ary ao amin’i Kristy isika, dia ao amin’Ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 1.2,32; tsang 1,19-20; Jn 3,16-17), dia afaka mametraka ny tahotra sy ny fanahiana rehetra momba ny "izay misy antsika amin'Andriamanitra" isika ary manomboka tena miala amin'ny fahatokiana ny fitiavany sy ny heriny mitarika eo amin'ny fiainantsika. Vaovao tsara ny filazantsara, ary raha ny marina dia tsy natao ho an'ny vitsivitsy ihany, ...
Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eto an-tany? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Angamba ny fifandraisana amin'ny extraterrestrial intelligence? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra izay hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany. Ny hafatra afovoan'ny Baiboly All ...
Ny famaritana matetika ny lanitra, mipetraka eo ambonin'ny rahona, mitafy akanjo mandry, ary mitendry lokanga dia tsy misy ifandraisany amin'ny fomba ilazan'ny soratra masina ny lanitra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny Baiboly dia mamaritra ny lanitra ho toy ny fety lehibe, toy ny sary amin'ny endrika lehibe indrindra. Misy sakafo matsiro sy divay tsara ao amin'ny orinasa lehibe. Io no fandraisana mariazy lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra ary mankalaza ny fampakaram-badin'i Kristy miaraka amin'ny ...
Rehefa amin'ny andro fisaonana, amin'ny 14. Tamin’ny 2001 Septambra , dia tonga nandre teny fampiononana sy fankaherezana ary fanantenana ny olona nivory tany amin’ireo fiangonana nanerana an’i Amerika sy tany amin’ny firenena hafa. Kanefa, mifanohitra amin’ny fikasan’izy ireo hitondra fanantenana ho an’ilay firenena ory, dia nisy mpitondra fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana maromaro nampiely tsy nahy ny hafatra izay niteraka famoizam-po, fahakiviana ary tahotra. Izany hoe ho an’ireo olona akaiky ny fanafihana...
Araka ny nampanantenainy dia hiverina ety an-tany i Jesoa Kristy mba hitsara sy hanapaka ny olona rehetra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ho hita ny fiaviany fanindroany amin’ny hery sy ny voninahiny. Ity hetsika ity dia mitondra ny fitsanganana amin'ny maty sy ny valisoa ho an'ny olo-masina. (Jaona 14,3; Epifania 1,7; Matio 24,30; 1. Thessalonians 4,15-17; Apokalypsy 22,12) Hiverina ve i Kristy? Inona araka ny eritreritrao no ho hetsika lehibe indrindra mety hitranga eo amin'ny sehatra manerantany?...
Efa naniry handondòna teo am-baravaranao ve ianao milaza aminao fa ny dadatoan'ny mpanankarena iray tsy mbola henonao akory dia ho faty ary namela vola be ho anao? Ny hevitra fa ny vola tsy hita fa tsy misy antony dia mampientam-po, nofinofin'ny olona maro ary foto-kevitry ny boky sy filma maro. Inona no hataonao amin'ny harena vao hita? Inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Moa ve izy ...
«Ho avy ny fitsarana! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha dieny izao fa ho any amin'ny afobe ». Angamba efa nandre teny toy izany na teny mitovy amin'izany tamin'ny evanjelista nikiakiaka ianao. Ny tanjony dia ny: hitarika ny mpanatrika hanolo-tena ho an'i Jesosy amin'ny tahotra. Ny teny toa izany dia mamily ny filazantsara. Angamba tsy dia lavitra loatra amin'ny sarin'ny "fitsarana mandrakizay" izay ninoan'ny Kristiana maro tamim-pahatsiravina nandritra ny taonjato maro ...
Raha tsy misy hoavy, hoy i Paoly, dia hadalana ny mino an’i Kristy (1 Kor. 15,19). Ny faminaniana dia ampahany tena ilaina sy tena mampahery amin’ny finoana kristiana. Manambara zavatra tena feno fanantenana ny faminanian’ny Baiboly. Afaka mahazo tanjaka sy herim-po be avy aminy isika, raha mifantoka amin’ny hafatra fototra ao aminy, fa tsy amin’ny antsipiriany azo iadian-kevitra. Ny dikany sy ny tanjon'ny faminaniana Ny faminaniana dia tsy fiafarana ho azy - milaza ...
Mba hialana amin'ny diso diso dia zava-dehibe ny mahita ny Matio 24 amin'ny toe-javatra lehibe kokoa (ny teny manodidina) ireo toko teo aloha. Mety ho gaga ianao raha hahafantatra fa ny tantaran'ny Matio 24 dia manomboka amin'ny Toko 16, andininy faha-21 amin'ny farany. Izao dia milaza am-pitiavana: "Nanomboka tamin'izay dia nasehon'i Jesosy tamin'ny mpianany ny fomba hankany Jerosalema ary hijaly be amin'ny loholona sy ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna ...
Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, noho izany dia mirona hanao ny zava-drehetra ianao eto ...
Ny "fivoaran'ny fampakarana" naroson'ny Kristiana sasany dia mifampiresaka izay mitranga amin'ny fiangonana rehefa miverina i Jesosy - rehefa resaka "ho avy faharoa", araka ny fiantsoana azy matetika. Milaza ny fampianarana fa ny mpino dia miaina karazana fiakarana iray; fa hapetraka any amin'i Kristy izy ireo, rehefa hiverina amin'ny voninahitra izy. Raha ny marina, ny mpino ny fampakarana dia mandeha ho toy ny andalana tokana: «Satria milaza aminao izahay miaraka amin'ny ...
Irinao ve ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela? Manantena ny hiafaran’ny fahoriana sy ny faharatsiana hitantsika manodidina antsika ary Andriamanitra dia hampiditra fotoana araka ny faminanian’i Isaia hoe: “Tsy hisy faharatsiana na loza eran’ny tendrombohitro masina; fa ny tany henika ny fahalalana an’i Jehovah tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina? ( Isa 11,9). Ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao dia niaina teo am-piandrasana ny fiavian’i Jesosy fanindroany mba hahazoany mivoaka avy ao amin’ny...
Hisy foana izay milaza ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny andro hiverenan’i Jesosy. Vao haingana aho no nahita ny tantaran'ny raby iray voalaza fa afaka mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray nilaza mialoha fa hiverina amin’ny Pentekosta i Jesosy 2019 hitranga. Maro ireo tia faminaniana no miezaka mampifandray ny vaovao farany sy ny Baiboly ...
Fanantenan’ny Kristianina rehetra ny fitsanganan’ny mino ho amin’ny fiainana tsy mety maty amin’ny fisehoan’i Kristy. Noho izany, dia tsy tokony hahagaga raha rehefa ren’ny apostoly Paoly fa nisy mpikambana sasany tao amin’ny Fiangonana Korintiana nandà ny fitsanganana amin’ny maty, dia ny tsy fahatakarany ny hevitr’izy ireo. 1. Taratasy ho an’ny Korintiana, toko faha-15, nolavina mafy. Voalohany, naverin’i Paoly ny hafatry ny filazantsara izay nambaran’izy ireo koa hoe: Kristy no...
Ny taona arivo taona dia fe-potoana voalaza ao amin'ny Bokin'ny Apokalipsy izay hiara-manjaka amin'i Kristy Jesosy. Aorian'ny taona arivo taona, rehefa nandavan'i Kristy ny fahavalo rehetra sy nanaiky ny zavatra rehetra, dia hatolony an-dRainy ny Ray sy ny lanitra ary ny tany. Ny lovantsofina kristianina sasany dia mandika ara-bakiteny ny arivo taona talohan'ny taona na taorian'ny fiavian'i Kristy; ...
« Marina fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, nefa ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo (Jaona 1.4,3). Efa naniry mafy ny zavatra efa hitranga ve ianao? Ny Kristianina rehetra, na dia ireo tamin’ny taonjato voalohany aza, dia naniry mafy ny hiverenan’i Kristy, saingy tamin’izany andro izany sy tamin’ny vanim-potoana dia naneho izany tamin’ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: “Maranata”, izay midika hoe ...
Rehefa fantatsika fa velona sy manenona ary ao amin’i Kristy isika (Asa 17,28), ao amin’Ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra ary tia antsika tsy misy fepetra, dia afaka manaisotra ny tahotra sy ny fanahiana rehetra momba ny toerana misy antsika miaraka amin’Andriamanitra isika, ary manomboka tena ao anatin’ny fahatokiana ny fitiavany sy ny heriny mitarika ho amin’ny fahafatesana. ampitsaharo ny fiainantsika. Vaovao tsara ny filazantsara. Eny tokoa, tsy ho an'ny olom-bitsy ihany izany, fa ho an'ny rehetra ...
Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitondra hafahafa, ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissors ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka fantany ny ...
Izao no voasoratra ao amin’ny Baiboly: “Andriamanitra dia fitiavana” (1. Jn 4,8). Nanapa-kevitra ny hanao soa amin’ny fanompoana sy ny fitiavana ny olona izy. Ny Baiboly koa anefa dia manondro ny fahatezeran’Andriamanitra. Ahoana anefa no ahafahan'ny olona iray izay manana fitiavana madio dia misy ifandraisany amin'ny fahatezerana? Tsy misaraka ny fitiavana sy ny hatezerana. Noho izany dia afaka manantena isika fa ny fitiavana, ny faniriana hanao ny tsara dia ahitana fahatezerana na fanoherana ny zava-drehetra mandratra sy manimba. Andriamanitra...
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1,9 Izao no ilazana antsika: “Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nakarina miharihary, ary nisy rahona nanala Azy teo amin’ny masony.” Amin’izao fotoana izao dia te hametraka fanontaniana tsotra aho: Nahoana? Nahoana i Jesosy no nesorina tamin’izany fomba izany? Alohan’ny hahatongavantsika amin’izany anefa dia mamaky ireto andininy telo manaraka ireto isika: “Ary raha nahita Azy niakatra ho any an-danitra izy ireo, dia, indreo, nisy roa lahy niakanjo akanjo fotsy nitsangana teo anilany. Hoy izy ireo: Ianareo lehilahy...
Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io. Ratsy foana ny mametraka fotopampianarana iray amin'ny andininy iray ...